Spice - Pejy fandokoana maimaim-poana ho an'ny ankizy
Pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Pejy fandokoana maimaimpoana sy fomba fiainam-pianakaviana
Turmeric - Ny zava-manitra mbola hafakely
Turmerika, antsoina koa hoe turmerika, dia teratany India. Ny vovo-mavo mavo dia ampiasaina amin'ny maha-zava-manitra, fanafody ary koa ho toy ny loko ho an'ny lamba sy taratasy any India sy Pakistan.
Turmerika - zava-manitra hafakely miaraka amin'ny fananana fanasitranana manokana
Noho ny maha-zava-dehibe ny kolontsaina, ny turmeric dia hajaina ho zavamaniry masina any India mandritra ny arivo taona.
Spice turmeric - Sary avy amin'i Steve Buissinne amin'ny pixel
Ny turmeric dia azo avy amin'ny zavamaniry Curcuma Longa, izay misy ifandraisany amin'ny sakamalao. Ny zavamaniry Curcuma Longa dia mila mari-pana eo anelanelan'ny 20 sy 30 degre Celsius ary orana be dia be mba hipoka.
Ny pulp volomboasary lalina ao amin'ny faka faka-maniry Curcuma Long dia manome ny turmeric ny lokony. Mba hanaovana turmerika, ny fakan'ny zavamaniry longa turmeric dia maina amin'ny lafaoro mafana ary avy eo totoina ho vovoka tsara. "Turmeric - ny zava-manitra mbola hafakely" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Essen, exotic, zava-manitra, zava-manitra, mahandro sakafo, tamotamoLeave a Comment ho an'ny turmerika - ny zava-manitra mbola hafakely
Dokotera sy aretina
Tantara an-tsary & tantara an-tsary
fialantsasatra ho an'ny daholobe
Modely sary am-baravarankely
Kolontsaina / foko
Famoronana lamaody sy lamaody
Sary an'i Mosesy
Fiarovana ho an'ny ankizy
Silhouettes - tapa-taratasy
Modely fianarana takelaka fanatanjahan-tena
Fanatanjahan-tena momba ny firaisana ara-nofo
Mianara manao sary miaraka amin'ny modely
Puzzles ho an'ny ankizy
Tantara fohy ho an'ny ankizy
Famakiana miaraka amin'ny ankizy
Saron-tanety sy torolàlana mivalona
Manangan-kevitra amin'ny asa tanana amin'ny ankizy
Doko famoronana miaraka amin'ny ankizy
Milalaova hevitra amin'ny ankizy
Lalao modely hatao pirinty
Maninona no zava-dehibe ny filalaovana
Ho an'ny olon-dehibe
Pejy fandokoana ho an'ny olon-dehibe
Lahatsoratra bilaogy farany
Amin'ny ankapobeny: sakafo mahasalama ho an'ny ankizy
Mety amin'ny lohataona - ny programa fanatanjahan-tena ho an'ny tsinay
Fiarahana amin'ny zanatsika
Fandaharana dihy miaraka amin'ny tolotra an-tserasera - tsy misy fialantsiny intsony
Ankizy sy ny mahaliana ny fiara lehibe
Ka ny fikasana tsara dia tsy fikasana fotsiny!
Tsingerintaona nahaterahana indray
Zumba ao an-trano - fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena